July 19, 2019 - Update New
ယောကျာ်းချင်း အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအား အလိုမတူပဲ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
July 19, 2019 Naing 0
ယောကျာ်းချင်း အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအား အလိုမတူပဲ အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား ဇူလိုင် ၁၈ ရက်/ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဥသျစ်ပင်ရဲစခန်းအပိုင်တလုပ်ပင်အုပ်စု ရေတွင်းလှကျေးရွာတွင် အသက်၂၆ နှစ်အရွယ်လူငယ်က အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးအား အလိုမတူပဲယောကျာ်းချင်း အဓမ္မပြုကျင့်ရန်အားထုတ်သည်ဆိုကာ (၁၇.၇.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ဥသျှစ်ပင်ရဲစခန်းသို့လာရောက်အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ […]
ားတွေကို အမြဲလုယက် နေတဲ့ ရွာသားတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကားဆရာ
ကားတွေကို အမြဲလုယက် နေတဲ့ ရွာသားတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကားဆရာ တဦးရဲ့ စေတနာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ဘက်ဒေသမှာ “ကယ်ရီမား”လို့ခေါ်တဲ့ ရွာတစ်ရွာရှိတယ်။ အဲဒီရွာက မြေဟာ ကျတ်တီးမြေ ဖြစ်တာ ကြောင့် ဘာမှစိုက်ပျိုး မဖြစ်ထွန်းခဲ့ဘူး။ ရွာသားတွေဟာ ဆင်းရဲလွန်းလို့ နပ်မှန်အောင် မနည်းကြိုးစားရတယ်။ […]
ဂဠုန်ဦးစော၏ အသုံးချခံ နယ်ရုပ်တစ်ရုပ် (သို့) အသက်အငယ်ဆုံး လူသတ်သမား
ဂဠုန်ဦးစော၏ အသုံးချခံ နယ်ရုပ်တစ်ရုပ် (သို့) အသက်အငယ်ဆုံး လူသတ်သမား သူ့နာမည်က ရန်ကြီးအောင်။ အသက် ၁၈ – နှစ် သာရှိသေးတဲ့ သေနတ်သမား။ ဦးစော ညီတဝမ်းကွဲရဲ့သား။ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုမှာ နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှ သူ့ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ။ သူ့ရဲ့ တဇောက်ကန်း စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဦးစောက အရင်ကတည်းမှ […]
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အောင်ဆန်း မသာအတွက် ငါတော့ ငွေတမတ် မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒီကဗျာတပုဒ်သာ ယူသွားပါ။ သခင်နုကို ​ပြောနေသော ဆရာကြီး၏မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ “သြော်…. အဆောင်ဆောင်နန်းတွေ ကြဌာန်းတွေနဲ့နှော အခေါင်မမြန်းခင်က အောင်စာတမ်းချို့စေဖို့ ​အောင်ပန်းညှိုးရရှာတဲ့ ​တောင်တမန်း တို့ဗမာမှာ အဟောင်းသံသရာ အငုတ်တွေနှင့် […]
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ချန်ဒူးဝှမ်ကို လုပ်ကြံတဲ့ အာဇာနည်ဗိမာန် ဗုံးခွဲခံရမှု ဖြစ်စဉ် နှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ ချန်ဒူးဝှမ်ကို လုပ်ကြံတဲ့ အာဇာနည်ဗိမာန် ဗုံးခွဲခံရမှု ဖြစ်စဉ် နှင့် ဗီဒီယိုဖိုင် ၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၉) ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အာဇာနည်ကုန်း၌ ဗုံးပေါက်မှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုဗုံးပေါက်ကွဲမှုသည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသမ္မတ ချန်ဒူးဝမ် အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ […]
ဂဠုန်ဦးစော၏ ဇနီး မှ ဗိုလ်ချုပ်အတွက် အသက်လျော်ကြေးလာပေးတဲ့အချိန် ဒေါ်ခင်ကြည် ပြောလိုက်တဲ့ သမိုင်းဝင် စကား ဂဠုန်ဦးစောသည် ကြိုးမိန့်ကျပြီးနောက် ကျဆုးံခဲ့ရသောအာဇာနည်ကိုးဦးအား အသက်လျော်ကြေးပေးရန် ၎င်းပိုင် လက်ဝတ်ရတနာများ ကိုရောင်းချ၍ ရရှိငွေကို အညီအမျှခွဲဝေပေးရန် ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်သန်းခင်အား ထောင်းတွင်းမှ မှာကြားခဲ့သည်။ ဒေါ်သန်းခင်သည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးစော၏ဆန္ဒအတိုင်း […]
အိုဇာတာ ကောင်းမကောင်း သိနိုင်မည့် အရေးအကြောင်း လက္ခဏာလေး…
အိုဇာတာ ကောင်းမကောင်း သိနိုင်မည့် အရေးအကြောင်း လက္ခဏာလေး… လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကံတရားကို ဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့ မရနိုင်ကြဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်တယ်။ ဒီိကံတရားကိုလည်း ဘုရားကလွဲပြီး ဘယ်သူကမှ ကြိုတင်မမြင်နိုင်ဘူး ဆိုတာလည်း လူတိုင်း လက်ခံကြလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ကံတရားကို အနီးစပ်ဆုံး အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုတင်ခန့်မှန်း နိုင်တာဟာ ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာပညာရပ်ပါပဲ […]
ဗိုလ်ချုပ်ကို စောင့်ကြိုနေသော ထီးလေးတစ်ချောင်း နှင့် အဆောင် အမှတ် (၁၁၃)…
ဗိုလ်ချုပ်ကို စောင့်ကြိုနေသော ထီးလေးတစ်ချောင်း နှင့် အဆောင် အမှတ် (၁၁၃) ပဲခူးဆောင် … ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော (၁၁၃) အဆောင်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အတွက် အိပ်ယာလိပ်နှင့်ကုတင်တို့ သီးသန့်ထားရှိတဲ့ လွမ်းမောဖွယ် အမှတ်တရတစ်ခု ပါ။ ဒီနေရာကိုရောက်ဖူးတဲ့ လူနည်းသလို ချောင်းကြည့်ဖူးတဲ့လူလဲ ရှိဖူးမယ်ထင်ရဲ့ ( […]
ဇနီးမယားဟာလင်ယောကျာ်းရဲ့ ဘာကြောင့် ”ဘယ်”ဘက်မှာပဲအိပ်ခွင့်ရှိတာလဲ
ဇနီးမယားဟာလင်ယောကျာ်းရဲ့ ဘာကြောင့် ”ဘယ်”ဘက်မှာပဲအိပ်ခွင့်ရှိတာလဲ မိန်းမက လင်ယောကျာ်းရဲ့ ညာဘက်မှာ အိပ်ရင် ယောကျာ်းက ဘုန်းကံနိမ့်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးမှာ စီးပွားရေးလာဒ်ပိတ်စေတယ်ဆိုတာ တကယ်လား ??? လင်ရယ် မယားရယ် ဖြစ်လာပြီဆို တစ်အိပ်ယာတည်း အတူအိပ် ကြရပါတယ် ။မိန်းမသားတွေဟာ လင်ယောကျာ်းရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ သာ အိပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ […]
နိုင်ငံခြားသားနဲ့မြန်မာနဲ့ကွာခြားပုံကို ပြောပြတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
နိုင်ငံခြားသားနဲ့မြန်မာနဲ့ကွာခြားပုံကို ပြောပြတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် သင်ဇာဝင့်ကျော်က မကြာသေးမီကမှ နိုင်ငံခြားသားချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲထားပေမယ့်လည်း ထွေထွေထူးထူးအသည်းကွဲနေတာမျိုးမတွေ့ရပဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်သာအေးအေးလူလူဆက်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ သင်ဇာက မကြာမီက မီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပေမယ့်သိပ်မခံစားရတဲ့အကြောင်းနဲ့ လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြောပြသွားပါတယ်။ သင်ဇာက ပွဲတက်တွေများပြီး ကားရိုက်နည်းလို့ ပွဲတက်မင်းသမီးဖြစ်သွားမှာမစိုးရိမ်ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ် “ပွဲတက်တာက သိပ်မပင်ပန်းဘူးပေါ့နော်။ နယ်ပွဲတွေကတော့နည်းနည်းပင်ပန်းတယ်။ အချိန်လည်းပေးရတာကို။ သရုပ်ဆောင်လည်းသရုပ်ဆာင်အလျောက်ပေါ့နော်။ ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ကားလေးတွေ ဇာတ်လမ်းလေးတွေစုထားတယ်။ […]